Ukoma kwenkukhu, ikakhulukazi yenkukhu, kubeka izithiyo endleleni yokupheka izitsha eziningi. Ikakhulukazi ithinta uma kukhona izitsha zethusi ezihleliwe noma izitsha ezenziwe ngomlilo ovulekile. Kodwa abalandeli be inyama yenkukhu nabalandeli bokudla okunomsoco bathola indlela yokuphuma. I-marinade yebele lezinkukhu ibhekana ngokuphumelelayo nokuma kwayo, okwenza inyama enamafutha futhi ithenda. Futhi uma ucabangela ukuthi zitholakala kanjani ezihlukahlukene, ungathenga ngokuphephile izibopho ngokukhululekile kunoma yiliphi iholide noma ukuhamba "kwemvelo".
I-marinade yamafutha omnqumo ne-oregano
Kuye, i-quarters amathathu yamafutha ahlanzekile kuthathwa (ngokwemvelo, umnqumo uyasetshenziswa), ingxenye yesigamu samanzi, ama-clove angu-3-4 e-garlic (vumela u-press) kanye nengxenye yesine ye-oregano omisiwe. Zonke izingxenye zixutshwe, ku-marinade yenyama yebele yenkukhu ishiywa futhi ishiywe amahora amabili. Ama-liquid atholakala kancane, kodwa akwanele ukucubungula isigamu sezingqikithi zama-kilogram - kufanele agxilwe ku-sauce ephumela.
Kulo, i-fillet iyancipha ngokushesha, ngakho-ke le recipe "i-ambulensi" ezimweni ongakulungele: ukufika kwezihlobo, ukuhamba ngokuzenzekelayo emvelweni noma ukutholakala kokungabi nalutho kwesiqandisisi. Ukuze ulungiselele i-marinade yenkukhu amabele, esitsheni, faka indebe yekomishi yamanzi kalamula kanye namafutha omnqumo, i-clove encane e-crumbled, i-pepper encane eqoshiwe njenge "umlilo" nokunambitha i-greenery - i-thyme, i-rosemary, i-parsley, njll. Inani lizokwanela ama-gramu angu-800 amagremu. Ziboshwe nxazonke - kanti nengxenye yehora ungabhaka.
Lena yi-marinade edume kakhulu futhi ethandwayo yenkukhu. Esigodini sewayini elibomvu elomile kwakubeka usawoti noshukela (nge isipuni), ubuningi bezinhlamvu eziningana, i-pepper - emnyama nephunga elimnandi, ngokulingana okuthandayo. Ingxube kumele ifudumele, kodwa ayikwazi ukubiliswa - ngokushesha uma ushukela nosawoti bechitheka, isitsha sisuswa epulatifeni. Uma i-marinade ikhulile, isifuba sibekwa kuso. Umthamo ukwanele isigamu se kilogram. I-filin ye-marinate kufanele okungenani ibe amahora amahlanu.
Enye yezinto ezilula kakhulu. Ingxenye yekhilogrethi ye-fillet igajwe ku-blender ku-gruel nge-anyanisi amabili, ithulwe ngosawoti, isingisi (inkukhu eyenziwe ngomumo, kodwa kunomnandi futhi kunempepho ukuhlangana nomuntu siqu) nompeli omnyama-isipuni ngayinye ku-teaspoonful. Le marinade yezinkukhu zezinkukhu igxila inyama, ngokucophelela, empeleni ihlutshiwe. Ukusekela kuso i-fillet kuyadingeka hhayi isikhathi esingangekhefu sehora kuyokwanela. Kodwa uma kukhona ubusuku efrijini, kuyoba yimijondolo kuphela.
Kubonakala sengathi umphumela kufanele ube mnandi, kodwa umkhuba ubonisa ukuthi lokhu akunjalo ngempela. Mhlawumbe ngoba lokhu kufanele futhi kuqukethe lwesinaphi sencelisi yenkukhu. Ixubene ngobuningi obulinganayo ngoju olucacile lwamanzi, i-soy sauce nesinaphi eshisayo kanye nejusi lemonsi - njengoba nje uthanda. Ukuze uthole ukunambitheka, ungakwazi ukwengeza imifino ebabayo. Ngezinongo, isoso asidingi, kepha uma uthanda, ungawafaka. I-filin ye-marinate kufanele ibe cishe ihora. Akusekufanelekile - kuyoba khona ukungqubuzana phakathi kobumnandi obuju nobukhali besinaphi.
I-Marinade kusuka ku-sesame ne-ginger
Ngokushesha "okusheshayo"! Xhuma i- sesame kawoyela kanye ne- Dijon lwesinaphi (nge isipuni), ama-ginger amabili, ingxenye yesine yengilazi yeviniga engavamile kanye ne-isipuni soy sauce. Ukuhlwithwa nge-fillet bese ushiya yedwa ngehora lesehora. Ibele lezinkukhu elibhaka ku-marinade eliphekwe ngokuvumelana nalesi iresiphi lihlukaniswe ngunambitheka walo omuhle kakhulu kanye ne-crust emangalisayo.
Ngaphezu kwalokho, siyaqaphela ukuthi akuzona zonke izindlela zokupheka ezibalwe, okungenzeka ukuthi zenze i-marinade eyingqayizivele yezinkukhu zezinkukhu. Kunezinketho ezisekelwe ku-orange noma i-ananas, ijubane le-yogurt ne-kefir, kunezindlela zokupheka ezinezithako ezingavamile noma ezingavamile. Sabala kuphela okuthandwa kakhulu, okuvivinyelwe futhi okufanelekile kunoma yisiphi isidlo sokugcina.
Isobho se-recipe esithombeni ngesinyathelo
Indlela yokupheka i-rhubarb pie: amathiphu kanye nokupheka
Ingulube eyilisiwe eyenziwe ngamanzi iyisiko sangempela!
Azimele efulethini. Ukunqaba efulethini (isampuli)
Ukuphepha kwe-inthanethi: wazi kanjani i-proxy yakho port
Indlela yokupheka pasta - izindlela ezihlukahlukene
Imvelo yamagnetism kanye nomvuthwandaba. I-Ampere's hypothesis mayelana nemvelo yamagnetism
Isikhala yezandla ngezandla zabo: nge futhi izingane
Ifilimu ethi "I-Cranes Are Flying": abadlali, izindima
Isibindi pie - kuyasiza, okumnandi futhi kwanelise
"Urgun", isikhungo sokuzijabulisa eBashkiria: incazelo, izithombe nokubuyekezwa